रसियन वैज्ञानिकले क्यान्सर निको पार्ने फल पत्ता लगाए, यो फल नेपालमा मात्रै पाईने « Sajha Page
रसियन वैज्ञानिकले क्यान्सर निको पार्ने फल पत्ता लगाए, यो फल नेपालमा मात्रै पाईने
यशुलार्इ विश्वास गरे सम्पूर्ण रोगव्याधी निकाे हुन्छ भन्दै गर्दा एक युवतीकाे यसरी ज्यान गएपछि…
''राई'' पृथ्विनारायणले दिएको पद हो या जाति नै हो त ? जान्नुहोस
अल बिदा डा. उपेन्द्र देवकोटा, यस्तो थियो उनको बास्तविक जीवन (भिडियो)
जान्नै पर्ने - पिनास के कारणले हुन्छ ? कसरी बच्ने ? के खाने-के नखाने ?
तीज गीतमा अहिलेसम्मकै खतरा नाच, हेर्नुहोस नाच्ने मान्छे राम्रा कि नाच राम्रो(भिडियो सहित)
थाइराइड के हो ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण र कसरी बच्ने ?
जहाँ पुरुषले होइन महिलाले गर्छन् बलात्कार, महिलासँग यौनसम्पर्क गर्न नमाने मुखमा पिसाब फेरिन्छ